कतै तपाइको ,बढ्दो खर्चले हालत खराब त भइरहेको छैन ? यी उपाय अपनाउनुहोस्, हुनेछ,…… धन वृद्धि – News Nepali Dainik
कतै तपाइको ,बढ्दो खर्चले हालत खराब त भइरहेको छैन ? यी उपाय अपनाउनुहोस्, हुनेछ,…… धन वृद्धि
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ १५, २०७७ समय: १८:४१:२५
***वास्तुशास्त्र एउटा यस्तो शास्त्र हो जसले परिवारको सुख समृद्धिको लागि प्रकृतिको उर्जा, स्रोत र पारिवारिक उर्जाको सही र सन्तुलित प्रयोग गर्न सिकाउँछ। जसले सफल जीवन बनाउँछ। यसैले विश्वभरीका मानिसहरुले यो शास्त्रलाई अनुशरण गरिरहेका हुन्छन्।
*#*#यसमा उल्लेख गरिएका यस्ता धेरै उपायहरू छन्, जसले जीवनका सबै समस्याहरूलाई एक क्षणमा हटाउँदछन्। यी उपचारहरूको लागि तपाईले न त कुनै कुरा किनमेल गर्नुपर्दछ न अनावश्यक चिन्तामा पर्नु पर्छ। तपाईका वरिपरिका चीजहरू मिलाउनु आवश्यक छ।
*#*#त्यसकारण आज हामी तपाईलाई वास्तुविज्ञ सचिन मेहराबाट यस्ता उपायहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। जसले तपाईको जीवनमा पक्का चमत्कार ल्याउनेछ।
***वास्तुशास्त्रका अनुसार, जब तपाईं दिउँसो वा राती सुत्न जानुहुन्छ, यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि तपाईंको ओछ्यान दक्षिणपश्चिम दिशामा मात्र हुनुपर्छ। साथै, तपाईको टाउको दक्षिण तिर हुनुपर्छ। यसले शरीरमा सही ऊर्जाको प्रवाहलाई अनुमति दिन्छ।
***साथै, तपाईको इष्टदेवको मूर्ति वा तस्विरको अगाडि नियमित रूपमा बत्ती बाल्नुहोस्। भुलेर पनि उनीहरूको वरिपरि औषधी नराख्नुहोस्। पूजा गरिरहेको बेला अनुहार उत्तर पूर्व वा उत्तर–पश्चिम तर्फ हुनुपर्छ। यस्तो गर्नाले तपाईको जीवनको सबै तनाव टाढा जान्छ र घरमा खुशी र समृद्धिको वास हुन्छ।
Last Updated on: January 28th, 2021 at 6:41 pm